XUURAAN XAREEDAYSAN: Waa kuwee 3-da musharrax ee ugu cad cad doorashada madaxtinnimada ee barri qabsoomaysa?! | Hadalsame Media
Home Maqaallada XUURAAN XAREEDAYSAN: Waa kuwee 3-da musharrax ee ugu cad cad doorashada madaxtinnimada...
XUURAAN XAREEDAYSAN: Waa kuwee 3-da musharrax ee ugu cad cad doorashada madaxtinnimada ee barri qabsoomaysa?!
(Muqdisho) 14 Maajo 2022 – Waxaa maanta ugu dambeeya olole si u jahawareersan oo ay musharrixiinta qaarkood u sameeyeen hanashada xilka madaxtinnimada dalka oo lagu kala baxayo berri oo Axad ah, haddii Alle idmo.
Marka aad guud ahaan dadka ku jira xayndaabka hoose ee xog ogaal ah waydiiso yaa ugu cad cad musharrixiinta waxaa inta badan soo noqonaya magacyada ilaa 5 musharrax oo kala ah laba Xasan, Sheekh Shariif, Deni iyo Farmaajo, marka la eego dhinacyo badan.
Taasi kama dhigna saadaal moowduuci ah oo biyo kama dhibcaan ah waayo waxay xildhibaannadu kuu sheegayaan in sidii jartii loo kala guurayo ama la iskugu guurayo saacad kasta.
Yeelkeede, qaar ka tirsan Xildhibaannada xogaha badan haya iyo dad kale oo uu Hadalsame Media la hadlayey 24-kii saacadood ee ugu dambeeyey, ayaan waydiinney dadka ugu sii cad cad.
”ida caawa laysugu guuro baan hubineynaa, balse qiyaastaydu waa Xasan Sheekh, Xasan Khayrre ama Sheekh Shariif midbaa ah Madaxwaynaha 10-aad noqonaya Axadda berri ah,” ayuu yiri Xildhibaan diidey inaan magaciisa xiganno.
Yeelkeede, sidaan sheegnayba warkani ma aha tirakoob moowduuci ah (objective statistics) oo waxaa soo bixi kara qof aan intanba ahayn, balse Hadalsame Media ayaa ogaadey in muhiimadda musharrixiintu ay haatan tahay sidii looga soo gudbi lahaa wareegga 1-aad.
”Qofkii ku baxa wareegga 1-aad isagu halkaa ayay uga dhamaatay, balse qof kasta oo usoo baxa wareegga 2-aad wuxuu leeyahay rajo, waayo wareegyada dambe ma aha kuwo la saadaalin karo.” ayuu yiri qof ka mid ah dadka ku dhow dhow doorashada iyo ololeheeda cilladaysan.
Previous articleDAAWO: Dadwaynaha oo si wayn uga fal-celiyey booqasho ay Puntland ku tagtay Sabriina Dhoorre
Next articleMaraykanka oo markii ugu horreeysey soo bandhigi doona SIR la dhowrayey sanado badan (Maalinta loo qabtay)